Iimbali zeYurophu ezinde kunye nezonakele ziyakwazi ukufikelela kwiindawo ezininzi. Ukuxhaswa-kwi-asethi yaseYurophu, njengeelwimi okanye ilungelo elibi lokungenelela emkhosini, lufumaneka kwihlabathi lonke. Iinkcukacha ezahlukeneyo zobuKoloni boBukumkani baseBrithani, abathengisi baseSpeyin okanye abaPortuguzi baziwa kakuhle kwaye bahlala bezukiswa njengelizwe elidlulileyo. Ngaphandle kweJamani, imbali yeli koloni ayithunyelwa rhoqo kwiJamani yinto enzima kakhulu.
Ukugqithiswa yiiMfazwe zeHlabathi zeMfazwe, kufikelela kwizifundo zembali zakutshanje ukuze zizenze ngokupheleleyo ekukhanyeni. Nangona-ngokuphathelele ekufumaneni insimu, xa kuthelekiswa nabalandeli balo - iJamani yezenzo zobuqili abazange baphumelele kakuhle, amaqumrhu aseJamani angama-colonial anecala lolwaphulo-mthetho olubuhlungu kubantu abemi bomthonyama kwimimandla yabo. Njengoko kuninzi imbali yeYurophu ye-17 th , 18, 19 neye-20 ye-century, isiJamani asikho mfutshane kwizenzo ezibuhlungu ezenziwa egameni lokuseka umbuso wehlabathi.
I-East East Afrika kunye neJamani-iSamoa
Nangona amaJamani ayingxenye yoKwandiso lweColonial Colonial ukususela ekuqaleni, ukubandakanyeka kweJamani njengamandla okuthotyelwa kwamakholoni kwaqala ukusebenza kwayo kunokuba kuphele. Esinye isizathu, ngokuqinisekileyo, sisiseko seBukumkani baseJamani ngo-1871, ngaphambi kokuba kubekho "iJamani" eyayinokuthi, njengowesizwe, ikholoni nabani na. Mhlawumbi esinye sisinye isizathu sokunyanzeliswa komsebenzi wokufumana iikoloni, okubonakala ngathi ziye zavezwa ngamagosa aseJamani.
Ukususela ngo-1884 ukuya phambili, iJamani ngokukhawuleza yaquka ama-coloni aseAfrika afana neTogo, Cameroon, iNamibia kunye neTanzania (amanye aphantsi kwamagama ahlukeneyo) kwi-Empire. Iimpawu ezimbalwa zasePacific kunye neChina yaseKhayina zilandelwa. Amagosa aseburhulumenteni baseJamani anenjongo yokwenza iikholoni ezisebenzayo, ezibangele ukuziphatha kakubi kunye nokuziphatha kakubi kubomthonyama.
Oku, okwenene, kwavelisa izivukelo kunye nokuvukisana, apho abacinezeli, ngokukhawuleza, bebeka phantsi. KwiJamani eMzantsi-Afrika eNtshona Afrika (iNamibia), iinkokheli zaseJamani zazama ukuhlukanisa bonke abemi beklasi eliphezulu laseJamani kunye nabasebenzi baseAfrika - emva kweengcamango zobuhlanga bezinto eziphilayo. Olu hlobo lokuhlukana aluzange lugcinwe kwiikoloni zaseJamani. Yonke ikoloniyali yaseYurophu ibonisa le mfanelo. Kodwa, enye inokuthi amabutho aseJamani ayenempumelelo kakhulu njengemizekelo yaseMamibia kwaye, isizukulwana kamva, umsebenzi weMpuma Yurophu ubonisa.
I-colonialism yaseJalimane yayiqhutywa yimpikiswano ekhuselekileyo, ezinye zazo zibizwa ngokuba yi-genocide (umzekelo, okubizwa ngokuba yiiHarro War, eziye zaqala ukususela ngo-1904 ukuya ku-1907), njengoko ukuhlaselwa kweJamani kunye neendlala ezilandelayo zijongene nokufa koqikelelo 80% yazo zonke iHerero. Amakoloni aseJamani "eMzantsi woLwandle" nawo awela kwixhoba lobudlova. Amabhatta aseJamani ayeyinxalenye yokuphelisa iBabeleer Rebellion eChina.
Isihlandlo sokuqala se-colonialism yaseJamani saphela emva kweMfazwe Yehlabathi I, xa abakhuseli bayo bathatyathwa kwiReich, njengoko kwakungenakufanelekela ukuba yi-colonial power. Kodwa i-Reich Reithathu yazisa ixesha lesibini.
Ukukhunjulwa kwama-colonial memorials kuwo onke ama-1920, ama-30 kunye nama-40 okulungiselele uluntu ukudala ubudala benkoloni. Enye, leyo yaphela ngokukhawuleza neyokuphumelela kwamaQumrhu aHlangeneyo ngo-1945.
Iikhumbuzo kunye nezikhumbuzo - Ixesha laseMzansi laseJalimane eliPhezulu liRafa
Iminyaka embalwa edlulileyo yempikiswano yoluntu kunye nenkulumo iye yacaca: Ixesha laseYurophu elidlulileyo alikwazi ukunyanzelwa kwaye kufuneka liqwalaselwe ngokufanelekileyo. Amaphulo asekuhlaleni aphumelele ukuqonda ukulwa nobugebengu bobukoloni (umz. Ngokubhengezwa kwezitrato ezitshintshileyo, ezithwala igama leenkokheli zenkoloni) kunye nabapheli-mlando bagxininisa indlela imbali kunye nememori eqokelelweyo ngokwabo ngokukhawuleza yakha ngayo kunokuphuhliswa komzimba. Ingcaciso-ntlalo yoluntu okanye yoluntu yenziwa ngokudityaniswa ngakwesinye icala kunye nokwakhiwa kwexesha elidlulileyo kwiingcamango zokudibanisa ubukhulu, njengokunqoba kwempi, kwelinye.
Ukubunjwa kwelokugqibela kuxhaswa yizikhumbuzo, izikhumbuzo, kunye neempawu zembali. Kwimeko yembali yaseburhulumenteni yaseJamani, ezi zinto zifakwe kakhulu kwi-Third Reich kwaye zidlalwa kuphela kwiimeko zayo. Imbali yamva kunye nomboniso wamanje wokuba kusekho indlela ende ekufuneka ihambe ngayo xa kufikelele ekusebenziseni iimbali zaseJamani zaseburhulumenteni. Izitrato ezininzi ziqhuba amagama omlawuli wamakholoni anetyala lezophulo-mthetho, kwaye izikhumbuzo ezininzi zisabonisa ubukoloniyali baseJalimane ngokugqithiseleyo, kunokukhanya okuthandana.
Iingcali Zembali: Iikhowudi eziqhelekileyo zifunyanwe zifihlwe kwiiSitembu
Ingaba Imoto Yakho Ifuna Isongezelelo se-Fuel NjengeGesi Emile?
Iimpawu zoMculo kwi-Piano Music